Warbaahinta Bulshadu Waxay Ku Soo Laabaneysaa Maalgashiga Aysan Qiyaasneyn | Martech Zone
Warbaahinta Bulshadu Waxay Ku Soo Laabaneysaa Maalgashiga Aysan Qiyaasneyn
Talaado, Agoosto 26, 2014 Talaado, Agoosto 26, 2014 Douglas Karr
Runta marka la sheego, shirkado badan oo aan la soo shaqeeyey ayaa dhib kala kulmay dabagalka iyo cabirka ku soo noqo maalgashiga markay tahay baraha bulshada. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aasaasi ah oo lagu soo saarayo qiime dadaallada warbaahinta bulshada ee ururkaaga:
Muxuu mugga taraafikada meheraddaadu kuugu kici doonaa adiga oo ku bixiya Bixinta Hal Guji? - Maaddaama ereyada muhiimka ah iyo kharashyada la bixinayo halkii guji la daabacay, waad iswaafaqi kartaa ereyadaada muhiimka ah Analytics kharashyada ku baxa halkii guji ee isla shuruudaha. Isku dar tirooyinka waxaadna badanaa heysaa sheeko aad u wanaagsan oo aad ugu sheegeyso ururkaaga inta lacag ah ee aad keydisay shirkadda.
Immisa mug mug ah ayaad si toos ah ugu tilmaami kartaa warbaahinta bulshada? - Raadinta iibka tooska ah ee laga helo ilaha warbaahinta bulshada waa dariiqa lagu kalsoonaan karo ee caddaynta soo noqoshada maalgashiga. Tan waxaa ku jira, dabcan, waa makiinadaha raadinta - oo sida caadiga ah u kaxeyn doona qaddar badan oo taraafikada shirkaddaada iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada.
Qaar badan oo ka mid ah suuqgeynta internetka iyo xirfadlayaasha warbaahinta bulshada ayaa dhow. Saameynta soo noqoshada maalgashiga ayaa si aad ah uga hooseysa qasabadaha tooska ah. Mid ka mid ah David Armano ayaa jaantusyo sanado ka hor waa mid aan sii wado inaan la wadaago:
The soo noqoshada maalgashiga ma aha sida fudud in la cabiro, laakiin way jirtaa. Farriintayda macaamiisha ayaa ah inaan awoodno bilow iyada oo lagu cabbirayo soo celinta maalgashiga labada dariiqo ee ugu horreeya - laakiin waxaa jiri doona habab badan oo dheeraad ah oo shirkaddaadu u arki doonto soo noqoshada maal-gashigeeda warbaahinta bulshada:
Ku noqoshada hogaamiye fikir warshadahaaga - haddii aadan u malaynaynin in iibku ka imaan karo si fudud magacaaga oo looga saaro warshadaha, waad qaldan tahay. Fure u ah warbaahinta bulshada ayaa ku darista muuqaal bini'aadam ah astaan ​​maxaa yeelay waxay dhistaa kalsooni. Aaminaadu waxay fure u tahay guusha ganacsiga. Markaad bilowdo kaqeybgalka warbaahinta bulshada si firfircoon, waxaa badanaa lagugu martiqaadayaa inaad kahadasho shirarka warshadaha iyo shirarka lammaanaha, dhacdooyinka, websaydhada, iwm.
Dhisida Xiriir Shaqsiyeed Macaamiishaada - way adag tahay in laga tago dadka aan ku korno ee aan jeclaano. Dadku mararka qaarkood waa xabagta aad ugu baahan tahay cilaaqaadka ganacsi si aad u haysato macaamiisha. Ma ahan dhammaan xaqiiqooyinka iyo tirooyinka, marar badan waa wax yar oo dheeri ah oo dadku sameeyaan. Waa shaqaalaha ka dhigaya farqiga iyo warbaahinta bulshada ayaa kuu oggolaaneysa inaad aragto gadaasha astaanta oo aad si shaqsi ah ula xiriirto dadka ganacsiga ku jira.
Ereyga Af suuqgeynta - waxaa la cadeeyay inuu yahay mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee suuq geynta ganacsi, laakiin maahan wax si macmal ah loo abuuri karo (isku day badan). Wadahadalka warbaahinta bulshada, waxaan kula talinayaa shirkadaha, wax soo saarka iyo adeegyada markasta oo aan awoodo. Tani badanaa waa dabeecadaha shabakadaha - codso caawimaad ama dhiirrigeliso adeeg dadkuna ay warka ku faafiyaan!
Dhisida Sumcad - Sumcaddu waa wax walba oo khadka tooska ah ku jira, oo sumcad weyn ku soo kordha bartaada, shabakadahaaga bulshada, iyo macaamiishaada bogagga iyo shabakadaha bulshada ayaa aasaas u ah aaminaad abuuri doonta ganacsi. Aaminaadu waa tan ugu muhiimsan macaamil ganacsi kasta, wayna fududahay in laga adkaado arrimaha kalsoonida iyadoo si shaqsiyan loola xiriiriyo dadka ka dambeeya astaanta.
Maamulka Dhismaha - oo ay weheliso dhisidda sumcad, waxaad kaloo dhiseysaa taariikh makiinadaha wax lagu raadiyo ee lagu cabiro xigashooyinka iyo gadaal gadaalba. Sumcaddaas joogtada ah, ee ku habboon mowduucyada gaarka ah iyo ereyada muhiimka ah, ayaa sii wadi doonta inay dhiirrigeliso waxyaabaha aad wadaagto iyo boggaga aad wax ku qorto xagga sare ee natiijada mashiinka raadinta. Raadintu waa isha weyn ee suuq-geynta suuq-geynta ee maalgashiga. Ha ku kadsoomin - guushaada baraha bulshada waxay si weyn ugu tiirsan tahay awoodda aad ku dhiseyso matoorada raadinta.
Iibka Tooska ah - Dad badan oo wax ka baaraya shabakadda ayaa akhrin doona, ka tagi doona, akhrin doona, ka tegi doona, akhrin doonaa, ka tegi doonaa, ka dib way soo noqon doonaan oo way hawl geli doonaan. Haddii akhriska lagu sameeyo baloog laakiin beddelaadku wuxuu ku dhacaa boggaaga e-commerce ama bogga shirkadaha, mararka qaarkood waa wax aan macquul ahayn oo leh websaydhka Analytics si loo aaneeyo booqashada tooska ah ee warbaahinta bulshada. Xaqiiqdu waxay tahay in qaar badan oo naga mid ahi ay ku xiriiraan warbaahinta bulshada laakiin adigu si toos ah ayaad ila wadaagtay aniga oo aan xusin balooggeyga… laakiin halkaas ayey ku jirtay saameyn ayayna ku yeelatay
Keydinta Kharashka Adeegga - Markay macaamiishaadu akhrinayaan baloogyadaada, waxaad saameyn weyn ku yeelan kartaa tirada adeegga iyo kharashaadka maareynta koontada adoo ku baraya khadka tooska ah. Warbaahinta bulshada ayaa badanaa ah mid dhexdhexaad ah. Halkii aad ku qori lahayd emayl jawaab u ah macaamil, waxaad ku qori lahayd khadka tooska ah oo aad u dhigi lahayd dadka badan. Way adag tahay in la cabbiro shaqada ay ahayd inaadan qaban - laakiin halkaasay ku taal!
Mawduuc iyo Fariin - maalin kasta oo shirkaddaadu ka qayb gasho baraha bulshada waa maalin ay shaqaalahaagu baranayaan, ku tababbaranayaan farsamaynta farsamaynta farriintaada, isla markaana u baahinayaan. Inbadan aniga ka hadal, la tasho, iyo wax ka qor baraha bulshada iyo saameynta ay ku leedahay ganacsiyada, sida ugu fudud ee aniga ay tahay inaan ka caawiyo rajooyinka cusub iyo macaamiisha inay fahmaan sida looga faa'iideysto. Waxaan kaqeyb qaadanayaa wadahadalka, aqrinayaa waxa khabiiro kale dhahayaan, anigoo arkaya waxa guuleystay iyo guuldaraystay, oo aan u adeegsan karo taas macaamiishayda. Qiimo aan caadi aheyn ayaa ku jirta tan laakiin way adag tahay in la cabbiro ROI.
Ku dhiirrigeli maalgashigaaga warbaahinta bulshada
Fursadaha gaarka ah ee bartilmaameedka ah iyo qiimaha jaban ee guji kasta oo ku saabsan xayeysiinta warbaahinta bulshada ayaa ka dhigaysa mid dhexdhexaadin gaar ah u leh oo ay tahay inaad gabi ahaanba ka faa'iideysato. Haddii aad waqti galinayso inaad dhisto dhagaystayaasha warbaahinta bulshada ama bulshada, markaa maxaad uga labalaabi lahayd maalgashigaaga oo aad u hubiso inay gaareyso dad badan oo ka tirsan shabakadaha aadka ula xiriira? Ma aha in la xuso xaqiiqda ah in Facebook iyo barnaamijyada kaleba ay siinayaan meelayn aad u wanaagsan xagga dallacsiinta mushaharka leh ee ku saabsan dabiicadda!
Maahan DHAMMAAN ama waxba.
Qaar ka mid ah khubarada ku dhex jirta baraha bulshada ma aqoonsana qiimaha baraha kale ee bulshada iyo baraha bulshada sida Twitter, LinkedIn, Facebook, iwm. Waxay aaminsan yihiin inaad waqtigaaga oo dhan ku lumiso sameynta hal shay. or kan kale. Waxay jecel yihiin inay isbarbar dhigaan barmaamijyada iyo istaraatiijiyadaha si ay u tilmaamaan istaraatiijiyadooda sida mid kaliya si aad u qarash gareyso oo dhan ilahaaga oo ay tahay inaad ku bixiso waxba on kuwa kale.
Waxa aan ku soo arkay baraha bulshada waa isticmaalka wax ku oolka ah ee warbaahin kasta si kor loogu qaado xooggeeda loogana fogaado daciifnimadiisa. Twitter waa qaab weyn oo lagu gaaro dad badan dadaal aad u yar…. laakiin maahan mid wax ku ool u ah mowduucyada (sida qoraalkan oo kale) oo u baahan sharaxaad faahfaahsan oo mowduuc ah. Bloggeygu waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah sharraxaad faahfaahsan. Marka - daqiiqado gudahood tweet ayaa si otomaatig ah loogu dhejin doonaa, iyada oo loo marayo Hootsuite in ka badan 80,000 oo ka mid ah taageerayaashayda shaqsiyeed iyo kuwa xirfadleyda ah… taasoo horseed u ah booqdayaal badan oo dib ugu noqda barteyda, qaarna la wadaaga boostada, iyo soo noqoshada maalgashiga ayaa aad u fiicnaan doonta.
Tags: sheegashada warbaahinta bulshadaadeegga macaamiisha warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ku soo noqo maalgashigawarbaahinta bulshada roiiibinta warbaahinta bulshadakharashka taraafikada warbaahinta bulshada
Ganacsigaagu ma raacayaa Anshaxa Warbaahinta Bulshada Dhaqannada ugu Fiican?
Inuu Kordhiyo Khadkaaga Webinar: Xisaabiyaha Webinar ROI
Jun 7, 2009 saacadu markay ahayd 9:43 AM
Fikrado aad u fiican oo ku saabsan tooska iyo tooska ROI ee warbaahinta bulshada.
Warbaahinta bulshada waa iskudhaf edbin ah oo ka socda Branding to PR ilaa Marketing. Sumeynta iyo PR waxay ku saabsan tahay ROI aan toos ahayn halka Suuqgeynta ay ku saabsan tahay ROI toos ah.
Laakiin markii shaqooyinkan oo dhan lagu soo tuuro hal foom sida warbaahinta bulshada, shirkaduhu waxay u baahan doonaan inay marka hore qeexaan waxa ay u adeegsanayaan warbaahinta bulshada, ka hor inta aysan go'aansan nooca ROI ee ku habboon.